China ọlaọcha ọlaọcha na Spandex (nje nje antibacterial / igbu) ndị nrụpụta na ndị na - eweta ngwaahịa | 3L Tex
Ihe onwunwe: Pure Silver ntekwasa naịlọn Spandex
Ọrụ Ọrụ Antiviral: 99.9%
Eguzogide elu: 0,2 Ohm / cm
Ọta Irè: 50.0dB-71.0dB
Ngwongwo Polyamide na-acha ọlaọcha na-eji Spandex
Aha ngwaahịa: ọla aka ọlaọcha na Spandex (nje nje antibacterial / kill)
Nkebi #: KS100S-G
Ihe: ọla ọcha dị ọcha naịlọn Spandex
Ọta Ikike: 50.0dB-71.0dB
Nkọwa nkenke: N'okpuru ndabere nke Covid 19, ọ bụ ihe ịga nke ọma maka ndị mmadụ iji chebe onwe ha site na iyi antibacterial nkpuchi ihu na uwe aka.
- Silver bụ onye kacha mma na-eduzi ihe na-arụ ọrụ nke ọma karịa ọla ndị ọzọ
- Antibacterial: nwere ike igbochi 99.99% ọla edo staphylococcus, klebsiella pneumoniae, HIN1
- Re-usable & washable: enwere ike ịsacha karịa 100 ugboro
- Soft na ala
- Ido ume
- Ejiji na amamiihe
Inddị Antibacterial: nje nje nke akụkụ okuku ume na-ebute - Covid-19, H1N1, Flu, candida albicans, staphylococcus Aureus, eschenchia coliform wdg.
:Kpụrụ: Ngwongwo ọla ọcha na-ewepụta ion ọla ọcha nke ga-ewepụ protein enzyme n'elu nje na ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ, si otú a na-ebibi usoro nke nje bacteria, na-emetụta ndụ ya, na iru ebumnuche nke antibacterial. % nje oria iku ume site na iku ume iku ume, Covid-19, H1N1, otutu na nkeji.
Ihe nlere ahụ sitere na Institute of Microbiology na Epidemiology nke Academy of Military Medical Sciences na-egosi na akwa antiviral nwere ike igbu ma ọ bụ gbochie influenza A na nje virus na obere oge.
SGS Nsonaazụ nnwale antibacterial:
Ugboro ugboro na ịrụ ọrụ nchebe:
Anti-akpa-efegharị efegharị / EMF echebe ụkpụrụ:
Ngwongwo antiviral na-arụ ọrụ ngwa ngwa nakweere teknụzụ nano-antiviral BCNT, nke nwere ike igbu ma ọ bụ gbochie ọrụ nke nje na nje.
Dị ka UK, Chile wdg mba nwere ụlọ ọrụ mepụtara ọla kọpa 3D nkpuchi / gloves na mgbochi nje, agbanyeghị, ọla ọcha na-arụ ọrụ karịa ọla kọpa.
Mmetụta Silvers: Na 5 mins ikpughe, nsị sarS coronavirus na mkpụrụ ndụ VERO belatara ruo ọkwa dị oke ala, na 20 mins, ọ dịghị mmetụta nsị ahụrụ.
Dị ka ezigbo onye na-eduzi ihe, ọlaọcha rụrụ ọrụ kacha mma karịa ọla ndị ọzọ.
Zuru oke ịhọrọ maka EMI / RFI Shield, Anti-Static, Electrically Conductive, Anti-Microbial uwe
Nke gara aga: Ihe nkpuchi ọla ọcha (antibacterial / virus)
Osote: Mkpịsị ọlaọcha (nje nje antibacterial / igbu)